Wararka Maanta: Talaado, Apr 30, 2013-Al-shabaab oo Madaafiic ku Weerartay Saldhigyo ay Ciidamada Huwanta ah ku leeyihiin Duleedka Magaalada Kismaayo
Weerarkan oo ahaa mid ay labada dhinac ay isu adeegsanayeen hub culculus iyo madaafiic ayaa waxa uu bilowday xalay abaare salaaddi cishaha kadib, waxaan daryanka madaafiicda ay labada dhinac is weeydaarsanayeen laga maqlayay inta badan xaafadaha magaalada Kismaayo.
Ilaa imika lama garanayo qasaaraha ka dhashay weerarkaasi, mana jiraan masuuliyiin katirsan dhinacyadii ay dirirtu dhexmartay oo faahfaahin ka bixiyay.
Xarakada Al-shabaab ayaa aalaaba waxa ay weerarro madaafiic ah ku qaadaa saldhigyada ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ku leeyihiin daafaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo shirkii maamul u sameynta Jubooyinka loo wareejiyay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo, halkaasoo ay imika ku suganyihiin inta badan ergadii ka qeybqaadaneysay shirka maamul u sameynta Jubooyinka.
Xarakada Al-shabaab ayaa waxa ay saldhigyo ku leeyihiin meelo aan sidaa uga fogeyn magaalada Kismaayo, waxaana dhanka waqooyi ay ku suganyihiin deegaanka Buulogaduud oo qiyaastii 30 KM u jira magaalada, halka dhinaca galbeedna ay ku suganyihiin deegaanka C/dhoore oo qiyaastii 25 KM u jira magaalada.